Vavanya ukutshintshwa komlilo wombhobho wobhedu.
Umatshini wokufudumeza wesantya se-DW-HF-25kw
• Ityhubhu ephambili ye-Copper - 1.13 ”(28.7 0mm) OD 1.01” (25.65 mm)
I-Riser tube ityhubhu-0.84 "(21.33 0mm) OD, 0.76" (19.30 0mm) ID
Amandla ancitshiswe ukusuka kwimveliso ekhuphe kakhulu eyi-10kW ukuya kwi-15kW ukubonelela nangokusasazwa kobushushu kwindibano kunye novavanyo lwekhoyili.
QAPHELA: Ixesha lokushisa linokuphuculwa ngokuqulunqwa kwekhoyili yesiko.
Malunga ne-704 ° C (1300 ° F)
Iityhubhu zobhedu zacocwa zaza zahlanganiswa. Amakhonkco amabini engxubevange ayenziwe kwangaphambili avela kwi-alloy efumanekayo kwilebhu yomboniso. Ucingo olusetyenzisiweyo lwalulinganisa i-0.787mm (0.031 ”) kububanzi Zombini iityhubhu zokuphakama zazifudula zihanjiswa ngombala omhlophe webraze. Indibano ibekwe kwi-coil yovavanyo kwividiyo evuthelayo kwaye i-alloy yahamba yaya kwenza indibaniselwano kwi-"T" interface kwi-30seconds.
Ixesha lokushisa ekujolise kulo kweyona ndibano incinci T idibeneyo yimizuzwana engama-20
. Sisebenzisa i-coil yovavanyo lwelebhu, sikwazile ukwenza umda kwicala lokujongana neetyhubhu (ubhedu) kwimizuzwana engama-30.
iindidi Teknoloji tags ukubheja ityhubhu yethusi, ibhanti ephezulu, Iphayibha yebhasi yombhobho ephezulu, ukugqithiswa kwebhanki ephezulu, ukukhangela ibhondi, ukutyumba ubhedu, Ukutyalwa kwebhodi yobhedu, lokutshisa Post yokukhangela